सडकको खाल्टोले ज्यान लिन्छ भने जिम्मेवार को ? « News of Nepal
सडकको खाल्टोले ज्यान लिन्छ भने जिम्मेवार को ?
केही महिनाअघिसम्म जोखिमपूर्ण सडकको उदाहरण दिनुप¥यो भने नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको नाम अग्रस्थानमा आउँथ्यो । अहिले सो सडक सरर गाडी चल्ने भएको छ । सडककै दुरावस्थाका कारण नेपालमा दिनहुँजसो दुर्घटना भइरहेका छन् । सरकारी निकायकै चरम लापरबाहीका कारण पैदल यात्रुदेखि साना सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । शनिबार कीर्तिपुरमा खानेपानीको च्याम्बर खुलै छाडेका कारण साइकल यात्री काठमाडौँ–१५, चागलका श्यामसुन्दर श्रेष्ठको मृत्यु भयो । खानेपानीको काम सकिएपछि खाल्डो नपुरेका कारण श्रेष्ठको ज्यान गएको बताइएको छ ।
राजधानीमा मेलम्ची र केयुकेएलका पाइप अव्यवस्थित रहेका कारण जोखिम बढे पनि जिम्मेवार सरकारी निकायको लापरबाहीले अनाहकमा सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको छ । यसअघि असारमा पनि तारकेश्वर नगरपालिका–११ स्थित नेपालटारमा ढलमा परेर ११ वर्षीया विनिता फुयालको ज्यान गएको थियो । यस्तै, शनिबार काभ्रेमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट जोगिन खोज्दा जिप पल्टिएर त्यसमा सवार नेपाल प्रहरीका डीआईजी सुशीलकुमार भण्डारी, पत्रकार जीवन पराजुली र युवा नेता विनोद कार्कीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । यी र यस्ता लापरबाहीबाट सिर्जित समस्याका कारण दिनहुँजसो दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ ।
दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, मानवीय कमजोरी र लापरबाही नै दुर्घटनाका कारक बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय देशभर नै टिपर आतंक बढेको छ । अधिकांश दुर्घटना टिपरकै कारण भइरहेका छन् । राजधानीका खाल्डाखुल्डीमा परी ज्यान गइरहे पनि सरकारले हरेक दिनजसो भाषणमा राजधानीका खाल्डो पुर्ने प्रतिबद्धता दो¥यारहेकै हुन्छ । तर, राजधानीलगायत देशभर नै धराप सडकका कारण जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । राजधानीमा मात्रै सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ५ जनाको मृत्यु तथा ३१ जना घाइते हुने गरेको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ ।
केही समययता टिपर आतंकको अर्को नाम बनिसकेको छ । सडकमा यात्रारत जोसुकै पनि टिपरको दादागिरी र आतंकबाट बेखबर छैनन् । एक–दुईपटकको घटनालाई दुर्घटना मान्न सकिएला । तर, शृङ्खलाबद्धरुपमा दोहरिइरहने घटनालाई आतंक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । टिपर ज्यानमारा बनेपछि विभिन्न जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेर गति नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । पटक–पटकको खबरदारीपश्चात् पनि टिपर आतंक रोकिएको छैन ।
सरकारले धराप सडक मर्मतमा चासो राख्दै दुर्घटना नियन्त्रण गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ । ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, लेन अनुशासन नटेर्ने, साना सवारीसाधनलाई साइड नछाड्ने, बढी कमाउने लोभमा धेरै टिप ओसार्न होडबाजी गर्ने सवारीसाधनका कारण सर्वसाधारण, पैदलयात्री र साना सवारीमा हिँड्न नै नसकिने अवस्था आइसकेको छ । सडकमा सर्वसाधारणको ज्यानको ख्यालै नगरी अन्धाधुन्ध सवारी हाँक्ने प्रवृत्तिलाई दुर्घटना मान्नु अन्याय हुन जान्छ । चालकको लापरबाहीबाट अनाहकमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सम्भावित दुर्घटनाको पर्वाह नगरी गाडी हाँक्नेहरु अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार हुनुको पडाडि कम उमेर र मापदण्ड पूरा नगरी चालक बन्नु पनि हो । अनुभवहीन र आलाकाँचा चालकहरुकै कारण दुर्घटना बढी भइरहेकोमा द्विविधा छैन । ट्राफिक प्रहरीले जतिसुकै सचेतना कक्षा सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुनुका पछाडि धराप सडक र गैरजिम्मेवार चालक नै कारक मानिएका छन् । सडकको खाल्डाखुल्डीसमेत पुरेर सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन नसक्ने सरकारबाट समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन । सडकको दुर्दशाको अन्त्य गर्न सरकारले समयमै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु जरुरी देखिएको छ ।
– स्मृति गजुरेल, चितवन ।